Shiinaha Acetonitrile Soosaarka iyo Warshadda | Freemen
CAS Maya: 75-05-8
Suuqa: Yurub / Hindiya
Halbeegyada muhiimka ah
Muuqaal: Dareeraha hufan
Biyaha: 0.03% max
Midabka (Pt-Co): 10 max
Amonia (mg / kg): 6max
150kg / durbaan, 12Mt / FCL ama 20mt / FCL
UN No.1648, Fasalka: 3, Kooxda xirxira: II
Analysis Falanqaynta kiimikada iyo falanqaynta qalabka. Acetonitrile waa qaabeeye dabiici ah isla markaana dareeraya chromatography lakabka khafiifka ah, chromatography warqad, falanqaynta spectroscopic iyo polarographic sanadihii la soo dhaafay. Maaddaama acetonitrile daahir sarreeya uusan ka nuugin iftiinka ultraviolet ee u dhexeeya 200nm ilaa 400nm, waxaa loo horumarinayaa inuu yahay dareeraha waxqabadka sare ee chromatography dareere (HPLC) oo leh xasaasiyad 10-9.
Acetonitrile waa dareeraha aadka loo isticmaalo, kaas oo inta badan loo isticmaalo kala-soocida soo saarida si loo kala saaro butadiene-ka C4 hydrocarbons. Acetonitrile waxaa sidoo kale loo isticmaalaa kala soocidda hydrocarbons-ka kale, sida kala soocidda propylene, isoprene iyo methylacetylene oo ka mid ah jajabyada hydrocarbon. Acetonitrile waxaa sidoo kale loo isticmaalaa xoogaa kala soocid gaar ah, sida soo saarida asiidhka dufanka leh ee saliidda cuntada iyo saliida beerka kalluunka, sidaa darteed saliidda la daweeyay waa mid khafiif ah, saafi ah, oo urkeedu fiicnaaday, halka faytamiinku weli isbeddello. Acetonitrile waxaa sidoo kale si ballaaran loogu isticmaalaa sida dareeraha daawada, sunta cayayaanka, waaxyaha dharka iyo balaastigga.
Medi Dhexdhexaadka dawada synthetic iyo sunta cayayaanka.Acetonitrile waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro dhexdhexaadiyeyaasha daawooyin badan iyo sunta cayayaanka. Daawada, waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro taxane dhexdhexaadiyayaal daawo muhiim ah sida fitamiin B1, metronidazole, ethambutol, aminopteridine, adenine iyo diphenyl qufac; sunta cayayaanka, waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro sunta cayayaanka ee loo yaqaan 'pyrethroid insecticides', ethoxycarb iyo kuwa kale ee dhexdhexaad ka ah cayayaanka.
Nadiifiye Semikoontoor. Acetonitrile waa maado dabiici ah oo leh furfurnaan xoog leh. Waxay leedahay milmo wanaagsan oo dufan, milix aan dabiici ahayn, walxo dabiici ah iyo unugyo moleculeed sare leh. Waxay nadiifin kartaa dufanka, wax, farta, wakiilka wax baabi'iya iyo haraaga qulqulka ee ku jira silsiladda. Sidaa darteed, acetonitrile daahirnimo sare ayaa loo isticmaali karaa wakiilka nadiifinta semiconductor. Applications Codsiyada kale: Marka lagu daro codsiyada kor ku xusan, acetonitrile sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inay yihiin alaab ceeriin ah oo loogu talagalay isku-dhafka dabiiciga ah, xoojiye ama qayb ka mid ah isku-darka biraha kala-guurka. Intaa waxaa sii dheer, acetonitrile waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dharka midabaynta iyo isku darka dahaadhka, sidoo kale waa xasiliyaha waxtarka leh ee dareeraha chlorine
Company Shirkad ay dowladdu leedahay oo leh khibrad ka badan 30 sano;
Factory Warshad heer sare ah oo HSE ah;
Badeecad ay ansixiyeen wadamo badan oo ka tirsan dawooyinka Yurub;
Grade Darajada elektarooniga ah waa la heli karaa
Waxaan leenahay nidaam maamul tayo leh oo dhameystiran, oo aan ku ekeyn muunad qaadashada, habka falanqaynta, helitaanka tusaalaha, Habka hawlgalka Heerka;
☑ Freemen waxay hubisaa tayada tayada, nidaamka adag ee maaraynta isbeddelada ayaa la raacayaa, oo ay ku jiraan habka iyo qalabka, sahayda alaabta ceeriin, xirxirida;
Sample Muunada waxay ku imaan kartaa gacantaada 20 maalmood gudahood macaamiisha caalamiga ah;
Tirada ugu yar ee dalabku waxay ku saleysan tahay hal xirmo;
☑ Waxaan jawaab ka bixin doonnaa su'aalahaaga 24hours gudahood, Kooxda farsamada ee loo qoondeeyay ayaa la socon doonta isla markaana diyaar u ah inay ku siiyaan xalka haddii aad wax codsi ah qabtid;
Ku soo dhawow xiriirka wixii faahfaahin dheeraad ah!
Xiga: 2,6-Diethyl-4-methylaniline (DEMA)
Waxaan markasta diyaar u nahay inaan ku caawinno.
Fadlan nala soo xiriir hal mar.
Cinwaanka: Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd (N), Shanghai 200030 Shiinaha
Telefoon: + 86-21-6427 9170
Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd (N), Shanghai 200030 Shiinaha